islamhouse.com » Soomaali » maqal » boga : 5
Balantii uu nabigu la galay haweenka
Muxaadaro ka hadlaysa waxyaabihii uu nabigu kula balamay haweenkii muslimiinta ahaa , iyo waxyaabaha laga rabo haweenka guud ahaanba.
Dhibaatooyinka wadamada galbeedka tagidooda lagala kulmay
Muxaadaro ka hadlaysa: dhibaatada iyo fitnada ay keentay in la aado wadamada reer galbeedka, taas oo ay ka mid tahay: qoyskii oo burburay, akhlaaqadii oo hoos u dhacday, aduunyadii oo la jeclaaday i.w.m
Ka noqoshada diinta ( ridada)
Macnaha ka noqoshada diinta , iyo axkaamta arintaasi ka ratibmaysa aduunyada iyo aakhiradaba, noocyada ka noqoshada diintu ay leedahay.
Macnaha hamiga sareeya, sababaha lagu gaadho hamiga wayn, iyo dariiqa loo maro, midhaha lagu gaadhayo, tusaalooyin hamiga wayn.
Macnaha qaraabo xidhiidhinta iyo fadliga ay leedahay , khatarta ku sugan qaraabo goynta, asbaabaha keena qaraabo goynta, iyo calaamadaha ku tusinaya arintaas, su’aalo muhiim ah.
Sharaxa kitaabka caqiida - Waasidiya
Kitaabkan Waxa uu sharaxayaa caqiidatul-waasidiya, oo ka hadlaya usuusha diinta iyo manhajka ahlu suna dhanka caqiidada
Shareecada in la raaco , sida ay dadkii wanaagsanaa ee hore ugu dhaqmi jireen diinta, iyo dhibaatooyinka ku dhaqan la’aanta diinta.
Muhiimada ay leedahay in diinta lagu sugnaado waqtiga fitnada, noocyada ay leedahay fitnatu, iyo sida looga gaashaamanayo.
Axkaamta iibka iyo shuruudiisa, iyo noocyada iibka xaaraamta ah, shirkadaha iyo qaybaha ay u qaybsamaan dhanka fiqiga iyo xukunkooda.
Waqtiga iyo ahmiyadiisa iyo sida looga faa iidaysanayo waqtiga, iyo sida ay dadkii wanaagsanaa ee hore uga faa iidaysan jireen waqtigooda.
Sharaxa kitaabka tawxiidka
Kitaabkan waxa uu ka hadlayaa: tawxiidka Eebe , waxa kale oo uu cadaynayaa shirkiga iyo bidcooyinka burinaya tawxiidkaas.
Cilmiga iyo ahmiyadiisa (01)
soo jeediye : Mohamed Cabdi Yuusuf dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
Cilmiga iyo ahmiyadiisa , fadliga cilmiga, aadaabta laga rabo qofka baranaya cilmiga. sideese loo baranayaa, sida ay diinta islaamku u waynaysay cilmiga, cilmiga la rabo in la barto waa kee.
Laab fayoobi (wanaag)
soo jeediye : Xasan Khayre Dirir dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
Macnaha Qalbiga ka fayow xanuunada ku dhaca, xaasidnimada iyo kala taga iyo isnacaybka iyo dhibaatooyinka ay u leedahay mujtamaca, khatarta ay leedahay in ceebaha dadka laga sheekeeyo.
Wanaaga islaamka iyo dhexdhexaadnimadiisa
soo jeediye : Cali Adam Nur dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
Macnaha dhexdhexaadnimada islmaanka , ku toosnaanta caqiidada toosan, ka caado dhigashada akhlaaqada iyo dhaqanka wanaagsan, la dhaqanka wanaagsan.
Wanaag faris iyo xumaan reebis
Macnaha Wanaag farista iyo xumaan reebista , xukunkooda, fadligooda, xigmada ku jirta in shaqadan la qabto, ayaa laga rabaa inuu u qumo shaqadaas.
Salaada:shuruudaha salaada iyo tilmaamaha ay la gaarka tahay, xukunka qofka ka taga salaada, fadliga salaada, su’aalo kooban.
Macnaha dacwada, jidka ilaahay oo dadka loogu yeedho iyo adilada ku tusaya arintaas, sideed dadka ugu qancin kartaa dacwada.
boga : 7 - ka : 5